Indostria Tiorka 5 -10 an-tapitrisany Euro Manondrana raha toa kosa ny kaonty an'arivony tapitrisa Euros mandeha any ivelany | RayHaber | Railway | Highway | telegrama fiara
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06Indostria Tiorka 5-10 an-tapitrisany amin'ny fanondranana Euro raha toa ka mandefa fitaovam-piadiana an'arivony tapitrisa dolara Euros Euros any ivelany
04 / 11 / 2019 Levent Elmastaş Ankara 06, 16 Bursa, 34 Istanbul, Central Anatolia, Railway, Railway Vehicles, ANKAPOBENY, KENTİÇİ Rail Systems, Headline, Faritra Marmara, Metro, TORKIA, tram 0
Raha mivezivezy ny indostria Tiorka mba hanondrana vola euros, dia miroso any amin'ny firenentsika ny rafitry ny lalavola miliara euro
Ny indostista indostrian'ny 5-10 tapitrisa Eurô hanondrana, hamorona asa eto amin'ny fireneko ianao, fa ny an'arivony tapitrisa an'arivony amin'ny varotra vahiny dia mandeha tsirairay.
Ny Sinoa dia nahazo ny marika fiara ambanin'ny tany 2009 izay natao tany İzmir ao 32 nefa tsy misy fandraisana anjara an-trano ary amin'ny vidin'ny 33 tapitrisa Euros.
Ny maintso lalamby 2012 natao tany Ankara any 324 dia azon'ny Shinoa nahazo ny fandraisana an-trano 51% ary 391 tapitrisa dolara.
Czechs no nandrombaka ny tenda 2012 tram natao tany Konya ao 60 nefa tsy misy fandraisana anjara an-trano ary amin'ny vidin'ny 104 tapitrisa Euros.
Hyundai Eurotem nandresy ny fiara 2015 natao tany Istanbul any 300 tamin'ny 50 tapitrisa 280 arivo Euro miaraka amin'ny fepetra fandraisana an-trano 200.
Ny Sinoa dia nahazo ny marika fiara ambanin'ny tany 2015 izay natao tany İzmir ao 85 nefa tsy misy fandraisana anjara an-trano ary amin'ny vidin'ny 71 tapitrisa 400 arivo Euros.
Ny Shinoa dia nandresy ny volabe ambanin-tany 2018 natao tany Istanbul any 272 noho ny vidin'ny 50 miliara 2 tapitrisa TL, eo ambany fepetra omen'ny tokantrano 448.
Ny famolavolana maimaim-poana amin'ny 1 miliara 196 tapitrisa 499 arivo 923 Euro, izay kasaina hatao ao Konya amin'izao fotoana izao, dia nomen'ny vahoaka Shinoa indray. Fa maninona izy no niaraka tamin'ny vola Shinoa ary te hamokatra fiara ambanin'ny tany rehetra izy miaraka amin'ny fotodrafitrany ary nosoniavina ireo sonia. Antenaina fa hanampy ny 80% fepetra fanampiny an-trano izy ireo.
Ankoatr'izay, eo amin'ny malemy ho an'ny fiara metro 172 izay hatao ho an'ny seranam-piaramanidina Istanbul, dia tokony halefa ao anatin'ny 8 ny fiara. Ny tombam-bidy eo ho eo dia manodidina ny 300 tapitrisa euros. Ka mila fiara vonjy maika ho an'ny olon-tsy fantatra angamba fa toa mandeha any amin'ny sinoa ihany. Ilaina ny manontany hoe maninona ireo indostrian'ny Tiorka no tsy nikasa an'izany rehetra izany raha naorina ny seranam-piaramanidina taona maro lasa izay.
Ankoatra izany, ny indostria Tiorka dia afaka manangana foto-drafitrasa sy fiara rehetra an'ny rafitry ny lalamby.
Moa ve tsy nieritreritra ny 11 amin'ny drafi-pivoarana isika mandra-pisian'ny 2023 ho fandraisana anjara an-trano ary marika nasionaly 80? Tsy efa niteny ve isika fa ao amin'ny 2023 Paikadin'ny indostria, homena laharam-pahamehana ny entana an-trano ary hosoloana ny vazaha ny entana ara-pahefana?
Ny famatsiam-bolan'ny 1 miliara Euro izay hatao ato ho ato ary ny mari-pahaizana 300 tapitrisa Euro metro ho tanterahina any Istanbul dia mahamenatra ny National Turkish indostria sy indostrialy raha omena ny sinoa na vahiny. Manaraka, misy mpandrafitra metro eo am-pananganana sy tetikasa any Izmir, Ankara, Istanbul ary Mersin. Ny fitambaran'ny vidin'ireto 5 miliara euro ireto.
Heveriko fa manala ny Sinoa sy ny vahiny, 11. Misy fomba tokana hanatanterahana ny fanapahan-kevitra rafitra an-toerana sy ny National Rail izay voarakitra ao amin'ny Drafitry ny fampandrosoana. Vola ihany koa izy ao Torkia sy mandray anjara amin'ny famokarana TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, DURMAZLAR, BOZANKA to, ASELSAN, araka ny TÜDEMSAŞ sy ASAS lalamby manontolo mpanamboatra rafitra miara-mitondra ny consortium ambanin'ny tafo ny lalamby manontolo rafitra miasa ao Torkia ho eo an-toerana sy ny firenena y'all I Mila manam-pahefana sy famporisihana ny governemanta aho hiteny fa hanohana anao aho.
Satria ny orinasa rehetra eto amin'izao tontolo izao dia mihamangatsiaka amin'ny alàlan'ny fampifangaroana azy samy izy. Ny CRRC sinoa dia namolavola tranobe matanjaka noho ny fampifangaroana ny orinasa 10, izay mamokatra rafitry ny lalamby. Ny Alemanina Alemanina sy ny orinasa frantsay Alstom dia nandeha nitokona mba hifaninana amin'ny CRRC shinoa.
Toy izany koa, raha tsy afaka mamorona fikaona mahery vaika isika eto amin'ny firenentsika, ireo orinasa izay mamokatra ny rafi-pitaterana Rail rehetra ary manao fampiasam-bola lehibe eto amin'ny firenentsika dia tsy ho ela iray ireo no hidi-baravarana tsirairay ary saika mpiasa 15.000 miasa ao amin'ireo orinasa ireo dia tsy hahasa ny asa.
Ireo orinasa ireo dia miady mafy handresy ny 5-10 tapitrisa euros any Romania, Poland, Thailand ary 11. Raha tsy manaraka ny fanapahan-kevitra noraisina tao anaty drafi-pampandrosoana izahay ary manolotra ny rafitry ny lalam-bidy miliara dolara ao amin'ny firenentsika ho an'ny vahiny dia hampalahelo ny indostrian'ny firenena.
Dr. Hizaha ny Full Profile an'i Ilhami
Lalamby Events: Fahafahana ho an'ny dalamby Transport Sector sy Manufacturing Industry ao Torkia Torkia 04 / 06 / 2013 ISO-RAYDER izay hatao ny 13 Jona 2013 fiaraha-miasa miaraka amin'ny 'dalamby Transport Indostria sy ny Famokarana Fahafahana ho an'ny orinasa any Torkia Tiorka' 'dia natao tao seminera 13 2013 Jona Alakamisy 09.30-16.30 ora. ...
Tetikasa Xnumx Billion Eurol ho an'ny rafitra fitiliana amin'ny drafitra fampandrosoana 09 / 03 / 2018 Ny drafi-pampandrosoana dia mijery ny famatsiam-bola 35 lavitrisa Euros ho an'ny rafitry ny lalamby. Ny minisitry ny fampandrosoana Lütfi Elvan dia nanantitrantitra fa ny rafitry ny lalamby dia handray anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ny fifandraisana eo amin'ireo faritra.
Ny orinasa Alemana dia naka tetikasa metro 1 arivo tapitrisa eo ho eo amin'ny tetikasa ambanin'ny 10 metatra ao Tehran sy Tabriz 05 / 04 / 2012 Ao amin'ny iray amin'ireo firenena izay nitarika ny US-fahirano an'i Iran indrindra fiantraikany Torkia. Natahotra hanao orinasa any Tiorka ireo orinasa Tiorka noho ny fanelingelenana, raha ny orinasa Alemanina kosa dia nanatontosa ireo foto-drafitrasa goavana tany Iran. Telo taona…
Ny fitambaran'ny 1 an-tapitrisany tapitrisa tapitrisa dolara any Tehran sy Tabriz 05 / 04 / 2012 Ao amin'ny iray amin'ireo firenena izay nitarika ny US-fahirano an'i Iran indrindra fiantraikany Torkia. Natahotra hanao orinasa any Tiorka ireo orinasa Tiorka noho ny fanelingelenana, raha ny orinasa Alemanina kosa dia nanatontosa ireo foto-drafitrasa goavana tany Iran. Telo taona…
Amin'ny maha-indostrian'ny lalamby Tiorka 20 / 09 / 2012 TCDD General Tale Karaman: "Araka ny TCDD, Tiorka lalamby toy izao ao amin'ny Trade Industry tsikelikely 'VI izahay' isika miady ho anareo izany" any Torkia, Manohana nomen'ny governemanta ho amin'ny fampandrosoana ny fomba fitaterana indray ...
Lalamby Events: Fahafahana ho an'ny dalamby Transport Sector sy Manufacturing Industry ao Torkia Torkia
Tetikasa Xnumx Billion Eurol ho an'ny rafitra fitiliana amin'ny drafitra fampandrosoana
Ny orinasa Alemana dia naka tetikasa metro 1 arivo tapitrisa eo ho eo amin'ny tetikasa ambanin'ny 10 metatra ao Tehran sy Tabriz
Ny fitambaran'ny 1 an-tapitrisany tapitrisa tapitrisa dolara any Tehran sy Tabriz
Amin'ny maha-indostrian'ny lalamby Tiorka
Ny orinasa Tiorka TLT hanangana foibem-pampahalalam-bola 150 tapitrisa Euro any Siberia
Ny famatsian'ny Siemens amin'ny orinasa Tiorka dia mihoatra ny 300 million Euros
Fampindramam-bolan'ny 300 tapitrisa euro amin'ny tetikasa metro ataon'ny orinasa Tiorka any Okraina
Eskişehir YHT Misaotra tamin'ny fizahantany ara-kolontsaina "nivelatra"